URob Hutting ucela ukunikwa ithuba njengoba esanda kuqokwa yiChiefs | News24
URob Hutting ucela ukunikwa ithuba njengoba esanda kuqokwa yiChiefs
Johannesburg - Umeluleki omusha wethimba labaqeqeshi kwiKaizer Chiefs, uRob Hutting, ucele ukuba abalandeli bekilabhu bangamehluleli engakaqali nokusebenza.
UHutting wethulwe kwabezindaba okukoqala eNaturena ngoLwesithathu, kulandela ukuqokwa kwakhe kungalindelekile ngoLwesibili.
UHutting ufike kwiChiefs nerekhodi elingajwayelekile, njengoba agcina ukuqeqesha emazingeni aphansi eGermany ngo-2006, nokwenze wacelwa ukuba enabe ngesipiliyoni sakhe.
Nakuba kunjalo, uHutting ongowokudabuka eNetherlands uzivikele ngokushesha, wathi akayona i-internet, ngaphambi kokuba acele ukuba anikezwe izinyanga ezintathu ngaphambi kokuba abuzwe lo mbuzo futhi njengoba esafuna ukuzibonakalisa.
“Ningazikhethela – nifuna ukuqeqeshwa yi-internet noma umqeqeshi owaziyo umsebenzi? Ngokwami ukubona, nibuze kahle, kodwa kungakuhle kakhulu uma ningaphinde ningibuze lo mbuzo ngemuva kwezinyanga ezintathu,” kusho uHutting.
OLUNYE UDABA: 'IChiefs izimisel engokusayinisa abanye abadlali'
“Engikufunayo nje ukusiza ukufezekisa izifiso esinazo. Engifuna ukunicela khona, ukuba ningayibulali ingane ingakazalwa.”
Uthe iChiefs ifuna amava akhe nokuyinto ayilethile, akezanga lapho ukuzochaza ukuthi lidlalwa kanjani ibhola e-Europe, kodwa uzosiza.
Imenenja jikelele yeChiefs uBobby Motaung iphinde yayichitha imibiko ethi uHutting unikwe lesi sikhundla ngemizamo yokumcabela indlela ebheke kwesokuqeqesha, kwazise inkontileka kaSteve Komphela izophelelwa yisikhathi ekupheleni kwenyanga kaJuni.
UHutting usayiniswe inkontileka yezinyanga eziyisithupha, esangavuselelwa ngokuhamba kwesikhathi.